राजनीतिक तमासामा निरीह दाहाल
राजनीतिक तमासामा निरीह दाहाल कुलचन्द्र वाग्ले
नेपाली राजनीतिमा यतिबेला कहिल्यै नभएको तमासा चलेको छ । तमासा रमाइलो पनि छ, पीडादायी पनि । कथित राजनीतिक तमासाका कारण देशको अस्मिता र देशवासीको भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने भने अनिश्चित छ । तमासा किन भयो वा कसको कारण ? यो प्रश्नको उत्तर सहज पनि छ असहज पनि । सहज उत्तर कम्युनिस्ट तमासा हो भने असहज यिनको लगाम कहाँ छ ? भन्ने हुन्छ ।
अहिलेको फोहरी राजनीतिमा एउटा सम्भावनासमेत जब्बर छ – त्यो कथित कम्युनिस्टको ‘व्यापार’मा नयाँ रुपान्तरणको ढोका खुल्नु हो । कम्युनिस्ट नेपालको राजनीतिको समस्या हो समाधान होइन भन्ने पुष्टि इतिहासले गरिसकेको छ । यसमा धेरै बहस आवश्यक छैन । एकैछिन घोरिएर विगततिर नियालियो भने कम्युनिस्ट समस्या सर्जकमा मात्र अगाडि देखिएको स्पष्ट हुन्छ ।
मीठा र आकर्षक नारा दिने । गरिब र सर्वहाराको नारा लगाउने, वर्गीय समानताको धक्कु लगाउने कम्युनिस्टहरु जब सरकारी सत्तामा पकड जमाउन पुग्छन् तब स्वयं सामन्त र स्वेच्छाचारी अधिनायक हुने गर्छन् । विश्वव्यापी अकाट्य यही कम्युनिस्ट परम्पराको उदाहरण नेपालमा नेकपा (एमाले) को केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार बनेको छ ।
कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीमात्रै होइनन् समग्र कम्युनिस्टहरुले नै एकपटक आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरुन् त्यहाँ देखिने एकमात्र तस्बिर अराजक, स्वेच्छाचारी र अधिनायक हुने कम्युनिस्ट दर्शन भन्दो भिन्न स्वरुप भेटाउन सम्भव छैन । यही तानाशाही वा अधिनायकवादी कम्युनिस्ट सोचको प्रत्युत्पादन अहिलेको राजनीतिक तमासा हो । यो तमासाको सहायक पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि हुन् भने खड्गप्रसाद शर्मा ओली महानायक ।
नेपाली राजनीतिमा भयंकर चतुर मानिएका तर चरम अवसरवादी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘ यतिबेला वैध, अवैध उपायमा खुँखार तिकडमबाज केपी शर्मा ओलीको प्रहारले निरीह साबित भएका छन् । दाहालले कसलाई धोका दिएनन् ? नोकरसँग होइन मालिकसँग कुरा गर्ने भन्दै दाहालले मालिक पुकारिएका राजालाई देखादिएको बाटोमा कुन बाटो पठाउन सहायक भए ? हेरे पुग्छ । आफूलाई सुरक्षा छाता ओढाउने शान्ति प्रक्रियाका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि धोका दिए । यसअघि केपी ओली र छोरीको झन्डा बोकाएका शेरबहादुर देउवालाई पनि दाहालले ‘पाहा’ जसरी पछारेकै थिए । अहिले आफैँ पनि पाहा झैँ पछारिएका छन् ।
दाहाल यतिबेला सर्वांग फुस्किएका प्रभावहीन नायक हुन् । उनका दजनौँ प्रभावशाली नेता, कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘बिग मार्टको कमोडिटी गुड्स’ बनाएपछि दाहाल शान्ति प्रक्रियापछिको सबैभन्दा निरीह स्थिति भोगमा पुगेका छन् । यही कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एकता गरिपाऊँ भनी अदालतको शरणमा निवेदन बोकेर पुगेका हुन् ।
अदालतले ठीक फैसला दिएको हो । ऋषि कट्टेलको नेकपालाई अग्रिम अधिकारमा स्थापित गर्यो । कानुनले जे भन्छ त्यही गर्यो । ह्याकुलाले मिचेर नेकपा खोस्ने दाहाल, ओली, नेपाल र खनालको नेकपालाई कानुनको सही बाटो देखाई दियो । यत्ति फैसलामा छोडेको भए सरकारी कथित नेकपाको हैसियत के हुन्थ्यो ? त्यसैले यिनलाई बचाउनै भन्यो – पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र हुनसक्छौ वा अर्को नाम न्वारन गरेर विधिवत् नयाँ दल बन्न सक्छौ ।
एमाले अध्यक्ष ओली अदालतको फैसलाले सन्तुष्ट छन् चाह जसरी नै उनी ‘जबज’ जन्माउने हैसियतमा पुगे । उनी अदालतले पार्टी एकता गराउने होइन भन्ने सत्यबोध गराउन दाहाललाई दीक्षा दिइरहेका छन् । दाहाललाई एकता चाहिएको हो भने अध्यक्ष ओलीलाई शरण मागेर निवेदनपत्र दिनुपर्ने, होइन भने आफ्नो माओवादी केन्द्रको हैसियतमा डट्नु पर्ने तर उनी उल्टो अदालतको शरणमा पुगे । राजनीतिमा यसभन्दा निरीह र लज्जास्पद अरु के पो होला र ?
राजनीतिले राजनीतिक बाटो लिनुपर्ने हो । अदालतलगायत राज्यका अरु निकायले आआफ्नो वैधानिक बाटो हिँड्ने हो । यो सत्य स्वीकार गर्नुको साटो पहिचानहीन दाहाल कार्यकर्ता र नागरिक समाजलाई भ्रममा पार्ने उद्देश्य बोकेर अदालतमा पुग्नु हास्यापद पाखण्डी उपाय हो । दाहाल किन पहिचानहीन भए भने न उनी नेकपा रहे न नेकपा एमाले नै बने । अर्कोतिर नेकपा (माओवादी केन्द्र) बन्न नमानेर उनी अदालत गए । राजनीतिक दलको स्थितिमा उनी अर्थात् दाहाल कहाँ रहे त ? ओली सरकारलाई समर्थन दिने कि विश्वासको मत फिर्ता लिने ? पहिचान के ?
यहाँ उनको सत्यबोध सत्य नै देखिन्छ । अब अप्रत्याशित चमत्कार भएन भने दाहालको राजनीतिक अवसान भयो । यसको बहादुरी प्रशंसा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै पाउँछन्, दिनु पनि पर्छ । राम्रो, नराम्रो जे भए पनि जसको कर्म वा शौर्य उसैको जस, अपजस । दाहाललाई भित्ता लगाउने खेलाडी त अध्यक्ष ओली न हुन् ।
हत्या, हिंसा परित्याग गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीमा प्रवेश गरेका पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक भविष्य अब के, कहाँ ? हार वा सकिने विन्दुबाट बच्न र भविष्य सुरक्षित खोज्न मुख्य दुई उद्देश्यले उनी अदालतको शरणमा पुगे । पहिलो अदालतको पूर्वफैसला उल्टाएर अध्यक्ष ओलीसँग हुन नसके पनि नेपाल, खनालसँग एकता गर्ने आधार बनोस् । यसै उपायमा दोस्रो नेपालसहितसँग वैधानिक संख्या पुगे अर्को दल दर्ता गर्ने वा बहुमतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने । उनका यी दुवै लालसा पूरा हुने देखिँदैन । जुट्न पनि नसक्ने र फुट्न पनि तिघ्रा कमाउनेलाई त्यसभन्दा अरु उपाय अदालतले के नै देओस् र ?
अदालतले त भनेकै थियो – कानुन मिच्न पाइँदैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) ऋषि कट्टेलको हो । नेकपा नाममा दाहाल, ओलीको आधिकारिकता पुग्दैन । अर्को दल बनाउने भए पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा जाऊ, कानुनबमोजिम नाम जुराऊ । नभए चुनाव लड्दा जो जहाँ थियौ त्यहीँ रहू । दाहालले निवेदनमा भनेछन् – निवेदकले नमागेको (एमाले, माओवादी केन्द्र बनाउने) विषयमा फैसला दिइयो । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको माग गर्दाको कुरा बिर्सेछन् । तेह्र दिनभित्र पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाई दिन कसैले माग गरेको थियो र अदालतसँग ?
संवैधानिक इजलासले विघटन बदर गर्ने फैसलामात्र गरेको भए ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठक अहिलेसम्म नबोलाए हुन्थ्यो के ?
लड्डुको गुलियो अहिलेभन्दा तीतो पीरो हुने थिएन र ? अर्थात्, अदालतले गर्ने फैसलाभित्र आउने अपेक्षित वा आवश्यक परिणामलाई पनि सम्बोधन गर्छ, गर्नुपर्छ । यही अवधारणामा तिम्रो नयाँ पहिचान बनाउने भए बनाऊ, नभए पुरानोमै तिमीहरु बाच्न सक्छौ, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भएर भन्यो त अदालतले बिरायो के ?
अब रुनुको अर्थ के ? अस्तित्व बचाउन दाहाललाई एमाले अध्यक्ष ओली चाहिएका हुन् भने उनकै समिपमा बिन्तीपत्र चढाउनु पर्यो । होइन, राजनीति नै हो भने माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका हैसियतमा राजनीतिक स्पर्धा गर्नुपर्यो । अदालतलाई हामीलाई मिलाई देऊ न भन्ने हास्यास्पद र लज्जास्पद रुन्चे हर्कतको के काम ?
दाहाल अदालतमा पुग्नु उनी राजनीतिकरुपमा सकिएको सन्देश हो । दाहालले पदमा जोरी खोजे, अध्यक्ष ओलीले उनको हैसियत झारिदिए वा देखाई दिए । राजनीतिक हैसियत खुइलिएपछि उनी अदालत पुगे । रहे, दाहालसँग मिलेर ओलीलाई कुर्चीबाट लघार्न उद्यत एमालेभित्रका नेपाल, खनाल । खनाल के गर्छन् भविष्यले देखाउला । नेपाललाई पनि अध्यक्ष ओलीबाट क्षमादान प्राप्त गर्ने वा राजनीतिक विद्रोहीको हैसियत देखाउने दुवै अवसर छ । के होला ? पर्ख र हेर हो । ओलीले त लखेट्नकै लागि सशक्त कारबाही गरिसके – जाऊ अन्तै कतै भन्ने सन्देश नेपाललाई दिइसके । ओलीले बाटोमात्र देखाएका छन् उनलाई ।
दाहाल, नेपाल रोइलो गर्दैछन् – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी वा आन्दोलनलाई क्षतविक्षत गर्दैछन् । यिनले कम्युनिस्ट सिध्याउने भए । साँच्चै त्यसै हो भने त अध्यक्ष ओली प्रशंसाका पात्र हुन् । किन चाहियो यस्तो कम्युनिस्ट दल र चरित्र ? जसले जनतालाई ढाँट्यो, दुःखी बनायो । विदेशी हस्तक्षेपको नांगो खेल मैदान देशलाई बनायो । संविधान मिच्यो, लोकतन्त्र भत्काउन उद्यत रह्यो, प्रेसको घाँटी मिच्न सहायक भयो । जनता झुक्याउन ‘विष कुम्भ पयो मुखम्’ चरित्र अपनायो । यस्तो कम्युनिस्ट किन चाहियो ? किन बाँच्नु पर्यो वा किन रहनु पर्यो ? राष्ट्र पीडक कम्युनिस्ट ?
यहींनिर कथित कम्युनिस्ट, खासगरी दाहाल, नेपाललाई सुवर्ण अवसर पनि आएको छ । उनीहरु कम्युनिस्ट नाम, काम र चरित्र समूल त्यागेर प्रजातन्त्रको पहरेदार हुने अवसर । यो अवसर अध्यक्ष ओलीले पनि छोप्न सक्छन् तर उनी एमालेमै रमाउने मुडमा देखिन्छन् । मौका छोपेर पूर्णतः प्रजातन्त्रवादी भए दाहाल, नेपाल नेपालको वैकल्पिक सशक्त प्रजातान्त्रिक शक्ति बन्ने सम्भावना प्रबल छ । यसैमा भविष्य सुरक्षित हुनेछ ।
नेपालमा लोकतन्त्रको एकमात्र पक्षधर दल नेपाली कांग्रेस छ । अर्को लोकतान्त्रिक दल विकल्पका निम्ति पनि अपेक्षित र आवश्यक छ । ‘फिल इन् द ग्याप’ भने झैँ यो खाली ठाउँ भर्ने सौभाग्य यिनलाई वा कुनै पनि कथित कम्युनिस्टलाई जुटेको छ तर खाँचो हिम्मत, हैसियत र इच्छाशक्तिको हो । उही गन्दगीमा बसेर, गाडिएर सफा सुगन्ध खोज्नु धूर्त कम्युनिस्ट पाखण्ड सिबाय के होला र ? नाम, काम, चरित्र र प्रतिबद्धताले नै विकल्प बन्न सक्ने लोकतान्त्रिक दलको खाँचो छ । त्यो कहिले, कसरी प्राप्त गर्ला देशले भन्न सहज छैन । अहिले चाहिँ कथित कम्युनिस्टलाई अवसर छ । दाहालको निरीहता हट्ने र सान्दर्भिकता पनि जोगिने यसभन्दा अर्को उपाय यतिबेला छैन । कम्युनिस्ट माधव नेपाल पनि लोकतन्त्रवादी नेता बन्नसक्छन् ।
भन्छन् – मौका आउँछ पर्खँदैन । फर्की हेर्दा जतिबेला दाहाल, नेपालसँग केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा चालीस प्रतिशतभन्दा बढी मत थियो, त्यही बेला अर्को दल बनाउने हिम्मत गरेको भए अहिले यिनको ‘घर न घाट’ हुनेथिएन । त्यो मौका अध्यक्ष ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने दम्भमा गुम्यो । अबको अवसर पूर्णतः लोकतन्त्रवादी बन्नुमा देखिन्छ । कम्युनिस्ट नै रहनु देश र आफैँलाई थप धोका दिनु हो । बुझे बेस !